House Narrowly Pelosi ကို Speaker အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန် ဒီမိုကရက်ပါတီ, Donald Trump, သတင်းဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး, ရီပတ်ဘလီကန်
သူမအောင်ပွဲမိန့်ခွန်းတွင်အသက် ၈၀ အရွယ်နာယကကသူမ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၏အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ COVID-80 ကူးစက်ရောဂါကိုဆက်လက်တိုက်ဖျက်ရန်နှင့်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဥက္ကaker္ဌ Pelosi ကထောက်ခံမဲ ၂၁၉ မဲ၊
ယူနိုက်တက်စတိတ်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကaker္ဌသမ္မတနန်စီပါလိုစီ (D-CA) ။
သူမ၏အောင်ပွဲမိန့်ခွန်း၌, 80 နှစ်အရွယ်နာယက သူမ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၏အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကိုဆက်လက်တိုက်ဖျက်ရန်နှင့်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
“ ဒီကနေ့ကတိသစ္စာပြုမှုအရအရင်တာဝန်မျိုးဆက်တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းတာဝန်ကိုခက်ခဲပြီးတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ဂရက်အသစ်ကိုထူးထူးခြားခြားခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာစတင်ပါတယ်။ Pelosi သူမ၏အောင်ပွဲမိန့်ခွန်းထဲမှာကဆိုသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအကြီးဆုံး ဦး စားပေးမှုမှာ coronavirus ကိုဆက်လက်အနိုင်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုအနိုင်ယူမယ်။
ဥက္ကaker္ဌ Pelosi ကထောက်ခံမဲ ၂၁၉ မဲ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဒီမိုကရက် ၂၂၂ ဦး နှင့်ရီပတ်ဘလီကန် ၂၁၂ ဦး တို့အားနေရာချပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သူမသည်သမ္မတ၏ဒုတိယနေရာတွင်သာကျန်ရှိပြီးသမ္မတ၏ရာထူးကိုတတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသောဒီမိုကရက်ပါတီသည်သူမ၏ပါတီမှအတိုက်အခံများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူမ၏ပါတီမှအဖွဲ့ဝင်ငါး ဦး သည်သူမရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ကွန်ဂရက်အထက်လွှတ်တော်တွင်အများစုရရှိနိုင်ရန်အတွက်အထက်လွှတ်တော် - ရီပတ်ဘလီကန်ပိတ်ဆို့မှုအန္တရာယ်မရှိဘဲဥပဒေနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြတ်ပြတ်သားသားလမ်းဖွင့်ပေးရန် - ဒီမိုကရက်ဂျွန်အော့ဆော့ဖ်နှင့် Raphael Warnock တို့သည်ဂျော်ဂျီယာရှိရီပတ်ဘလီကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်များဖြစ်သော David Perdue နှင့် Kelly Loeffler တို့ကိုအနိုင်ယူရမည် နှစ်ပေါင်း။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွက်ဆန္ဒမဲပေးမှုသည်ထိုပြည်နယ်တွင်မဲကိုပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သောမဲများကို“ ရှာဖွေရန်” ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူး Donald Trump ၏အသံဖမ်းခြင်းဖြစ်သည့်နေ့၌ပင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ဝါရှင်တန်ပို့စ် Joe Biden ကိုဂျော်ဂျီယာတွင်အနိုင်ရသူနှင့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် Trump စနေနေ့ကကြောင်းပြည်နယ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကိုအတည်ပြုဘို့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်များစွာသောသိသာထင်ရှားသောအခြေခံနှင့်အတူပြစ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်နှင့်အတူသူ့ကိုခြိမ်းခြောက်, မြောက်မြားစွာပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီနှင့်အတူသူ့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။
"သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမင်းသိတယ်၊ မင်းဒါကိုမအစီရင်ခံဘူး" ဟုသမ္မတကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒါကရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုပါ။ ၎င်းသည်သင်နှင့်၎င်းအတွက်ကြီးမားသောအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ။ ။ သင့်ရှေ့နေ ဒါကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ပဲ။
"ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကတော့ဒါပါပဲ။ ကျွန်မမဲ ၁၁၀၀၀ ကျော်ရှာချင်တယ်၊ အဲဒါကငါတို့ထက်ပိုပါတယ်" နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် Trump ခေါ်ဆိုမှုအသံသည်နှင့်အညီ, ကပြောပါတယ်. “ မင်းဟာမင်းတွက်ချက်ထားတာကိုမင်းပြောတာမှားတယ်မဟုတ်လား”
ယူအက်စ်ကွန်ဂရက်သည်မဲရေတွက်ခြင်းအခမ်းအနားအတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ပူးတွဲအစည်းအဝေး၌တွေ့ဆုံသည်။ အခမ်းအနားကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းသမ္မတ၏ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်နှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူများအဖြစ်ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ၏ကိန်းဂဏန်းများအရဆက်စပ်မှုရှိနေလိုသောဆန္ဒကြောင့်အလုပ်ပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဤအတောအတွင်း Joe Biden ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်သမ္မတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရန်စီစဉ်ထားသည်။
အများပိုင်သတင်း ဒီမိုကရက် Donald Trump Georgia Nancy Pelosi အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု